Posted by Lyndon Reys	 11 Amazwana
Ukwazi umehluko phakathi imibala ehlukahlukene imikhiqizo Kratom? Most sellers classify their Kratom strains as red, white noma green kuncike coloration of the vein central in the iqabunga. Uma ubukisisa a leaf esihlahleni Kratom, you will notice that the stem and vein running down the middle has a faint coloring. Le umbala ngqo nohlelo kanjani uhlobo oluthile zikuthinta ngokwengqondo nangokomzimba. The stem cishe njalo zisuswa plant ngaphambi kokuthi kube into amaqabunga ochotshoziwe, powder noma akhiphe format. Nokho, esinezimila plant ndaba kwesihlahla ebomvu Versus green Ukuqhathanisa emithanjeni white kuzohluka amakhemikhali.
Red Vein leaves are viewed as better for some purposes while White Vein or Green Vein herbs may be more effective for other purposes. Izihlahla vein imibala ehlukene bavame ziyachuma ezindaweni ezahlukene futhi babe okuqukethwe ngezigodi alkaloid ukuthi babanike imiphumela yabo ekhethekile. Esihlokweni esilandelayo, ngeke siqhathanisa imiphumela Red emthanjeni vs. White vein vs. Green vein Kratom ukuze unqume okuyinto engcono kakhulu kuwe. Khumbula ukuthi ulwazi ehlinzekwe ngezansi liyisiqondiso jikelele futhi akubona bonke uzobona imiphumela efanayo esebenzisa amagciwane efanayo.
Plant ishiya nge vein white phansi phakathi ngokuvamile abachazwe ngokuthi ashukumisayo more futhi sandla mood positive. Bangase isetshenziswe njengoba evuselela endaweni caffeine ukugqugquzela ukuqapha, siqaphile ngokwengqondo futhi sihlale siphapheme. Abasebenzisi abathatha White vein Kratom izimpushana noma amaphilisi ngokuvamile usuchaza ukuthi batfola anda okuhlushwa kanye nesisusa nokukhuthazela lapho besebenza amahora amade. Kungase nemicabango of ukukhathala futhi ukozela, ngaphandle kubangele ixhala noma ukungahlaliseki.
Patients suffering from depression or asthenia will experiences the best results when using this strain of Kratom. Uma uthola caffeine ukuba too inkanuko, ungase ufikelwe jitters noma ukucasuka uma usebenzisa White Kratom. It can also lead to insomnia or restless sleep if taken too late in the day. It sekwande ukuxuba White vein amaqabunga noma izimpushana nge Red vein zamagciwane ukuphumelelisa umfutho ngokulinganisela energy.
Kratom Iningi okuthengiswa namuhla of the ezihlukahlukene Red emthanjeni, uchaza ngokuthi kokuba nethonya ukuzola more ukuthi angakusiza sokuphumula futhi uvalo. It kungasiza eside impela ingqondo yakho ngenkathi enikeza uzizwe inhlalakahle nangethemba. Red Kratom libuye kahle kuhambisana ukusetshenziswa njengendlela sithuthukisi ubuthongo phakathi abantu nge yokuqwasha. Emzimbeni, this type of Kratom is known to reduce pain and can be used to treat muscle tension or as an alternative to pharmaceutical pain killers. Ezinye eziqine Kratom ezikhishwe ezisetshenziswa opium ukuhoxiswa ukuthi zivela esigabeni Red emthanjeni.
Within the family of Red Vein Kratom products, kukhona impela kancane kwehlukahlukana ngokoMthetho izinzuzo ezithile ungase ufikelwe. Ezinye amagciwane like Bali Kratom kuthiwa badingiswa ngenxa yokuba analgesics ngempumelelo kakhulu kanti abanye ungaveza okukhulu kwemizwa ngcono kanye state owesese kwengqondo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi imiphumela ziyahlukahluka in a maqondana umthamo-dependent kuzo zonke amagciwane amaqabunga Kratom. In okuncane ungaveza imiphumela ivuselela kodwa ikakhulu lolu hlobo of Kratom isetshenziselwa ukugqugquzela ukuthula nokuzola.
Green vein Kratom is kakhulu ngokufanele ngokuthi endaweni ethile maphakathi Red nobunzima White. It is a onomoya energy booster ezingaba perk wena up ngaphandle okufaka on onqenqemeni. Abasebenzisi bathi kubasiza ukuba sifinyelele isimo okugxile esikhathazayo sokuhlala siqaphile futhi focus bese kunomphumela olucashile iqhathaniswa Red noma White Kratom. It lulotshiwe njengoba ewusizo ubuhlungu nokwelapha, kodwa ngaphandle okuholela ukucobeka noma ukozela ukuthi ezinye analgesics kungabangela. Abanye brand ayethandwa kulesi sigaba zihlanganisa Green yeSumatra Kratom, Borneo Green, Thai Green and Green Malaysian.
Green Kratom ngezinye izikhathi exutshwe Red noma zamagciwane White ukunikeza uhla more kahle izimfanelo imiphumela. It kungavimbela ukupholisa owedlulele usebenzisa Red vein izimpushana ngenkathi ukuqinisekisa ningabi kuka-bavuselelwa nge White emthanjeni amaqabunga. This type of Kratom is often used to treat social anxiety and for recreational purposes before heading out for a night on the town. Ukusebenzisa Green Kratom kungakulethela uthambekele kakhulu ukuba zenze izenzo social by bobabili besikusiza ukuba uphumule futhi ekhululekile izilungiselelo social kanye nokwenza kwakho ikhuluma more.
So what type of Kratom is best: Red vein vs. White vein vs. Green vein? Ukunquma ilungelo Kratom umthwalo ukusebenzisa indaba arcade kwesokunxele kuya yokuzikhethela. Nakuba kukhona ukufana obuyisisekelo phakathi imibala ehlukahlukene amaqabunga Kratom, akuzona zonke amagciwane Red eletha imiphumela efanayo futhi okufanayo uya for the White and Green ongakhetha kanye. Lezi characterizations kungcono njengemihlatshelo Overviews jikelele kanye umthwalo ngamunye angase asebenze ezahlukene ngawe. A enhle kakhulu ukunquma okwenza umqondo kakhulu kuwe ukuthenga iphakethe Kratom sampler nge izimpushana eziningana ezihlukahlukene noma amaphilisi kusuka umthwalo umbala ngamunye. Ungakwazi ke zama kubo bebodwa noma qhathanisa inhlanganisela ezahlukene kusukela Red, White and Green varieties to design your own fusion.
wathi 4 iminyaka edlule
sicela kwisi e german.
Ngiyakuthanda vietnames nomhlophe kratom viened
Angicabangi umuntu uchaza White Esebenzisa umfanekiso kratom ngempela kahle. White Esebenzisa umfanekiso intandokazi yami – hhayi ngoba inika 'hawu amandla', njengoba abantu abathi – kodwa kunalokho ngoba eside isikhathi eze-up ukuthi ekugcineni ishaya inani eliphakeme eduze 2 amahora. Futhi endaweni Ngithathe 'elikhazimulayo’ injabulo wonke, kodwa futhi uqaphile kakhulu ngokwengqondo.
Ngichaze umuzwa White Esebenzisa umfanekiso njengabaphuma nsé nalezo tramadol, umthamo omkhulu. ukuqala & isiqongo kufana kakhulu, njengoba umphumela evelele elwa nokudangala (Isasasa lango). Futhi Ngiye eside waphawula ukuthi lo mphumela athi tramadol ihlukile zamagciwane White Esebenzisa umfanekiso kuphela. Okunye kratom zamagciwane Ngiye esetshenziswa nje ukuza & Hambani masinyane kakhulu, abanye ngisho kubangele fogginess okuncane. Kodwa White Emithanjeni ahlukile kakhulu, Ngiyabonga Nkosi.
Thank You Jonathan ngokunginika ukuqonda kangcono vein..I ezimhlophe usanda kuthenga ezinye njengoba bengifunda ngenhla Ngacabanga cishe got vein okungalungile.. manje uma ngazithela okuthunyelwe kwakho ngineminyaka engu kakhudlwana …ukucabanga ngalithola one..thanks kwesokudla futhi
Indlela Great okuchaza! Enginakho eziningi ubuhlungu kusuka Humana ... Ngicabanga uzobe ezama lokhu. Ngiyabonga!!
Ngathenga zamagciwane ezimbalwa ezahlukahlukene futhi kubonakala sengathi wonke izimpendulo wonke amasayithi imibuzo ukuthi kungcono kakhulu ngempela kudida lapho konke ebuzwa kuyinto okuyinto umbala kuhamba phambili udaba oluthile, njenge , white, red, ukukhanya marshanda noma amnyama. Njalo impendulo sabo non impendulo nokuthi kufanele nje ukuthenga umkhiqizo futhi ubone ukuthi usebenza kuwe. Bengicabanga ukuthi abathengisi kufanele nje kuqonde bathi ,njengesibonelo,, ezimhlophe kusiza ukuqwasha,, oluhlaza ukukhanya kuqinisa energy lil futhi noma oluhlaza emnyama iwukuba amandla xaxa kanjalo nokunye umbala kusiza ubuhlungu. Into efana okungase kwenze kube lula umthengi ukuthenga. Enye indlela nje kubonakala sengathi yayo nje omunye umkhonyovu kungekho ukuhlolwa yangempela noma
Ngiyavuma white is inkanuko n fealing sindiso ingabe uzosinda eside. Ngiyayithanda obomvu ozithokozisa noma fade out ukucindezeleka n kanzima yami imicabango. Kodwa da maeng iyona srongest ukudala ukukhathazeka futhi amnyama uhlale. It hits Quik n im okuqukethwe kakhulu ke jus doesnt zokugcina. Mina uhlanganise lapha n ther kodwa zama ukuya esikhathini esidlule 6 amagremu ngosuku ngaphandle ulwesihlanu yayo
Siyabonga ekufakeni umqondo wami ukuze kuxazululeke mayelana vein mhlophe. Ngisanda uthenge kratom yami yokuqala futhi wacabanga kungenzeka mina ayithole okuthile inkanuko kakhulu ngemva kokufunda lesi amasayithi ukuthumela. Uzizwe ungcono kakhulu manje (efanayo Danine)
Ngithola maeng da whate futhi abomvu umthambo ukuxubana iyona engilungele bengilokhu percocets isikhathi eside ngemva kokuhlinzwa wamaphaphu futhi waqala Ungasebenzisi lesi sikhathi njengethuba kwenye indawo kuleso futhi kuyasiza kakhulu Ngingumfana uphapheme futhi kungelula ukuba ngakho groggy kwangikhanyela ukuhoxa futhi percocet ngokuphila kwami ​​mina kakhulu reccomend ke
Bengilokhu ngizama Kratom okwesikhathi kwesikhathi esingaphezudlwana konyaka manje. Isizathu kungani ngakhetha Kratom yingoba nganikwa izinyanga ezimbalwa ukuze siphile lapho ngisendleleni benzodiazepines futhi umuthi wezinhlungu. Ngangikhuluma nothile kangangokuba umzimba wami liyahluleka. Ngakho ngicwaninga futhi wathola izinto ezimbili. Ngathola Kratom yebo, futhi Phenibut. Ngangiyisihambi abagxeki ekuqaleni ngoba ngacabanga yayingekho indlela into engingayenza nje ukuthenga nganoma isiphi isikhathi ezazizosiza. Kodwa unkulunkulu wami! Kodwa ngangenza iphutha lol. Uma ufuna ukuvala izidakamizwa ke sicela uzame Kratom. Uma ungenayo okwamanje, zama Phenibut kanye uma unenkinga nokukhathazeka futhi noma ubuthongo. Ngizama sisakaze izwi Kratom. Kwakuyisimangaliso mina.
Ngifuna ukusho futhi ukuthi ngiye ukuthatha Red Esebenzisa umfanekiso Kratom futhi ube ukubekezelelana omkhulu ukuze konke Red Esebenzisa umfanekiso ngakho mina ashintshele Ngamela Green haka isikhashana. Yikuphi kulungile ngoba cishe njengokuzijabulisa okuphumuzayo. White Esebenzisa umfanekiso Kratom Ngisanda wazama namuhla futhi kuyangijabulisa kakhulu. Lokhu kubonakala kungenangqondo kimi ikhiqize kakhudlwana ngokusobala, kodwa hhayi nje ukuthi, womphakathi njengoba nginawo lapha zokufuna uthayiphe konke ngiyazi Kratom lmao. Siyabonga kokufunda lokhu. Isikhathi pizza. Kratom kwandisa isithakazelo sami.
Ngiye isanda kuthenga 50g White Esebenzisa umfanekiso yeSumatra ukungisiza nge ukuphuza kwami (30 ngonyaka oludakayo, hhayi esiphuza ku 100 the last 114 izinsuku, kodwa 14 izikhathi ngiye baphuza bebelokhu wokugcina 3 amasonto). Ngathola lo ukusiza ngiziphuce umuzwa ukukhathazeka ngithola, futhi okokuqala Ngangivame ke, ke benza iqhinga. Mina namanje baphuza, kodwa lokho kwakungenxa yokuthi ngifuna ukufunda okuningi kulo mkhiqizo, futhi awukwazi ukuchitha amahora inthanethi ngaphandle isiphuzo. Vele baphuza 'phisa' wami wokuqala, ukuthi ngayithanda indlela ngesipuni ushukela, kodwa ngaphambili, njengoba kusho, Wenze T&W ukuthi ngempela ukuthatha onqenqemeni off. Nginifisela nonke inhlanhla kulokho owufunayo, ngicela ungazise imicabango yakho futhi.
Ukuqinisekisa Ikhodi * 4+2=?